Waa maxay muraayadda sare ee borosilicate? Dhalada sare ee borosilicate miyaa jilicsan?
1. Waa maxay muraayadda sare ee borosilicate galaaska Sare borosilicate galaas waxaa laga sameeyey tiknoolajiyad wax soo saar sare iyadoo la adeegsanayo astaamaha tabinta ee muraayada heerkulka sare iyo kuleylka gudaha galaaska si loo ogaado dhalaalka dhalada. Muraayadda sare ee borosilicate waa nooc ka mid ah “galaaska la kariyey”, cos ...
Baahinta aqoonta dhalada dhalada ah
Halkaa marka ay marayso, in muraayadda dawada ama weelka sodium carbonate-ka uu gaadhayo heerka uu ku xidhan yahay waxay ku xidhan tahay haddii galaaska dawooyinka (1) loo isticmaalo. 2. Birta aan xarka lahayn waa inay ku jirtaa ugu yaraan 13% chromium iyo nikkel ama manganese. Nadiifnimada dhammaan alaabada aluminium waa inaysan ka badnaan 3% by mas ...